Na China ụmụ ahụhụ na-atọ ụtọ maka okpo ọnụ | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ebe njegharị, Gastronomy, Asia njem
Ọ na-amasị m iri ihe ọ bụla. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile masịrị m, anaghịkwa m asọ oyi ọ bụla n’ụwa. Na tiori, n'ihi na echere m na agaghị m atọ ụmụ ahụhụ ụtọ. Amaghị m… do na-eme? Mụ ahụhụ dị na nri ChinaỌ bụghị na niile, ma na gastronomy nke ụfọdụ mpaghara akpan akpan.
Ndị China abụghị ezigbo ndị isi na-eri ụmụ ahụhụ, ya bụ, ọ bụghị naanị ha. Na mgbakwunye, ụmụ mmadụ na-eri ụmụ ahụhụ kemgbe ọtụtụ puku afọ. Na-aga China? Ya mere, ka m gwa onwe m na e nwere ụmụ ahụhụ nri pụrụ iche.
1 Iri ụmụ ahụhụ
2 Nri China na ụmụ ahụhụ
Iri ụmụ ahụhụ
Na usoro ahụike na a na-akpọ ya entomogafia. Dị mmadụ eriwo ụmụ ahụhụ ruo ọtụtụ puku afọ, akwa, larvae na ụmụ ahụhụ tozuru etozu a na-agụ na nri anyị kemgbe oge ochie na n'ọtụtụ omenala, ha na-anọgide na-enwe isi ha na kichin.
Sayensị maara banyere puku ụdị ahụhụ ụmụ mmadụ na-eri na 80% nke mba ụwa niile na mpaghara niile. Ọ bụ ezie na n'ọdịbendị ụfọdụ ọ bụ ihe a na-ahụkarị, na ndị ọzọ a machibidoro ya iwu ma ọ bụ nkwanye ugwu na ndị ọzọ ọ bụ ihe a machibidoro iwu ma bụrụ ihe arụ.
Kedu ahụhụ ndị a na-eri? Ndepụta a dị ogologo mana enwere ọtụtụ ụdị butterflies, termit, bees, wasps, cockroaches, grasshoppers, nla, crickets. Iri umuaka nwere uru ya na ọghọm ya, enwere uru dị na gburugburu ebe obibi yana maka ahụike anyị, mana ihe niile chọrọ nlekọta na ịdị ọcha.
Mgbe ụfọdụ, mmadụ nwere ike iche na iri ụmụ ahụhụ nwere ihe jikọrọ ya na ụbịam, mana ọ bụ echiche na-enweghị aka. Ka anyị chee na India bụ mba dara ogbenye ma ndị bi na ya anaghị eri anụ, ọ naghị eri ụmụ ahụhụ. You maara na mba nke na-ata ahụhụ kachasị ụmụ ahụhụ bụ Thailand? Ee, o nwere ụlọ ọrụ nde dollar 50 nke na-emetụta chinchi.
Nri China na ụmụ ahụhụ
China bu ala buru oke ibu ma kesaa ya na otutu ala ma nke obula meputara uzo esi esi nri di iche iche di na aka. Ọ bụ ezie na nri ndịda na-adaberekarị na osikapa, nri ebe ugwu na-eji ọka wit eme ihe, naanị iji nye otu ihe atụ.
Luckily, ma ọ bụrụ na ị na-asọ oyi ihe ọ bụla na ị chọrọ iri ụmụ ahụhụ na China ị nwere ike ime ya na Beijing n'onwe ya, isi obodo. Ọ bụghị na iri ụmụ ahụhụ bụ ihe si ụfọdụ mpaghara dị anya, furu n’ugwu.
Ezigbo saịtị maka nke a bụ Ahịa Wangfujing nke dị na mpaghara Dongcheng. Ọ bụ a n'okporo ámá jupụtara gastronomic na azụmahịa ụlọ ahịa, otu n'ime ndị kasị ama na obodo.
Akụkụ raara nye kichin bụ nke dị na Wangfujing Street na ọ bụ ihe pụrụ iche. E kewara ya na ahia abalị na okporo ụzọ nke aperitifs. Ma nri na-gụrụ ndị ahịa na ma ndị na-ewu ewu na Chinese na njem nleta.
Ọtụtụ nri bụ esi ya na oyuyo, n’ọkụ, ma ọ bụ ghee ya eghe na n'ozuzu ị nwere ike ịhọrọ ụzọ esi esi nri. E nwere ọkụkọ, nri, ero, mgbọrọgwụ lotus, tofu, nri mmiri, na ihe ọ bụla iji tụọ ụjọ… ruo mgbe ị ga-abịakwute chinchi ahụ.
N'ebe ahụ, na-enweghị ịkpọasị, ị ga-ahụ ụmụ ahụhụ ka a na-agbanye na ezé ezé. Mụ ahụhụ na ọtụtụ ahụhụ na ndị mmadụ jupụtara na ha n'ọnụ ha na-erite uru na nri ha, protein na mineral. Ọ na-esiri anyị ike iri ụmụ ahụhụ, ọdịbendị anyị na-egbukwa ha ...
Amaghim, rie akpị, silkworm pupae, nje ndị ọzọ, ndị e ghere eghe, na ududo O nwere ike ịbụ njem nke ndụ gastronomic gị. Ọ dịzịrị gị. Ndị nwara ihe ndị a na-ekwu na ha anaghị atọ ụtọ nke ukwuu, ọ bụ naanị na ụbụrụ gị na-egwuri egwu ịgwa gị oge niile na ị na-eri chinchi ... gummy ma ọ bụ crunchy, mana chinchi n'agbanyeghị.
Ma ọtụtụ ndị China hụrụ ya n'anya. Ka emechara, nri bụ nnọọ omenala. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịgagharị n’ahịa a ị ga - ahụ ya na ngwụcha ebe ugwu Wangfujing.
Ọbụghị naanị na Beijing ị nwere ike iri ụmụ ahụhụ, na Kunming. China nwere ihe karịrị agbụrụ iri ise na agbanyeghị na Han bụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu, enwere ọtụtụ ndị ọzọ. Dị ka ihe atụ, ndị agbụrụ Jingpo bụ ndị a ma ama n'iri ụmụ ahụhụ. Ọ bụrụ n ’ịnọ na Kunming, e rie chinchi!
Lee ha na-eri nri eghe eghe eghe, cicada nwere ụkwụ na nku ya gụnyere, aki oyibo na ụfọdụ nchinchi ojii nke isi mkpịsị aka. Simao Yecai Guan bụ ụlọ oriri na ọ recommendedụ recommendedụ a tụrụ aro ka ị dịrị ụmụ ahụhụ. Nchịkọta nhọrọ nwere ihe niile m kwuru na etu ọnụ na-ere ihe karịrị 150 euro kwa ụbọchị na ụmụ ahụhụ.
Kunming na-abịaru Thailand nso kwa ụbọchị n'ihe banyere gastronomy ahụhụ, yana inwe ụlọ nri na ndị mmadụ na-eri ụmụ ahụhụ n'ụlọ ha. enwere ụlọ ahịa ndị pụrụ iche dị iche iche dị iche iche ma na-ere ha ọhụụ na oyi.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịzụta Yunnan wasp larvae n'etiti euro 23 na 38 kwa kilogram na kwa afọ ahịa nke ụdị a naanị na-akpali ihe 320 puku dollar. Ọ dịghị ihe ọjọọ. Ọ na-eto eto. Enwere ihe dị ka ugbo 200 na ụmụ ahụhụ na County Qinyuan, bụ ụlọ ọrụ na-akpa ahụhụ kacha ukwuu na China. ma na-amịpụta metrik tọn 400 kwa afọ.
Nke bụ eziokwu bụ na China bụ mba nke ga-azụju ọnụ ọgụgụ ndị ọnụ ọgụgụ ha ikpeazụ, nke emere na 2010, egosighi ihe ọ bụla na ihe na-erughị ihe karịrị ijeri mmadụ 1300 Ọ na-eto eto. Yabụ ọ bụrụ na ụmụ ahụhụ nwere ike ịnye ntakịrị nri maka nri, nnabata.
Akụkụ ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na ụfọdụ ndị ọkachamara na-ekwu na ugbu a mba ahụ adịghị njikere ịivelyụ ụmụ ahụhụ, n'agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ nwere obi ebere na gburugburu ebe obibi ma nyere aka na nsogbu ahụ. N'ihi gịnị? Okwu nke nchekwa dị ọcha.
China ka nwere ụzọ isi aga n'okwu a, ọ ga-eru ma ọ dịkarịa ala otu ụkpụrụ nchekwa nri tupu ịkwalite ụmụ ahụhụ dị ka nri. Anyị enweghị ike ichefu nke ahụ ụmụ ahụhụ ụfọdụ nwere toxins, ihe ndị na-egbu ahụhụ, na nje bacteria na usoro esi esi nri mgbe ụfọdụ ezughi oke iwepu ihe egwu ndị a.
Ndị osi nri China, ndị na-ahụ maka ụlọ ahịa na ụlọ nri, ha abughi ndi guru akwukwo banyere nchekwa nchekwa nri. Ha kwenyere na ọ bụrụ na ejiri akpị na ikpuru ikpuru na ọgwụ ọdịnala ndị China ọ nweghị nsogbu na iri ha. Ọ bụrụ na ha esi nri na ezigbo okpomọkụ, nke ahụ ezuru.
Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ọnweghị ihe na-emenye gị ụjọ ma ịchọrọ iri chinchi, China bụ ebe dị mma n'ihi na ebe a ha bụ nri ụtọ maka okpo ọnụ. Kporie nri gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » Na China ụmụ ahụhụ na-atọ ụtọ maka okpo ọnụ
Ihe m maara bụ na m nọ na mbara ala a. Omume ndị Oriental, dị ka ịchụrụ ụmụ anụmanụ àjà na ịta ha ahụhụ maka oriri, na-ewute m nke ukwuu. Oriakụ Maria Leyla ziri ezi. Esi m Guadalajara, amakwaara m na site na mba ọ bụla n'ụwa, anyị na-ajụ omenala ndị a. Ọ bụ ezie na nkà na ụzụ ha enweela ọganihu, dị ka ndị mmadụ kpamkpam.
Zaghachi Fernando Martínez Martínez
Kedu obodo ị ga-eleta na United States